जलविद्युतले फेरिएको ग्रामीण जनजीवन, वेरोजगारहरू लाख कमाउँछन् ! - UrjaKhabar जलविद्युतले फेरिएको ग्रामीण जनजीवन, वेरोजगारहरू लाख कमाउँछन् ! - UrjaKhabar
जलविद्युतले फेरिएको ग्रामीण जनजीवन, वेरोजगारहरू लाख कमाउँछन् !
काठमाडौं । पेम्बाछिरिङ शेर्पा ‘मिजार’ दोलखा, लामाबगरका स्थायी बासिन्दा हुन् । लामाबगरमा उनको किराना पसल छ । निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, कामदार सबै उनको पसलका नियमित ग्राहक हुन् ।
लामाबगर फर्किएर पसल सुरु गर्नुअघि उनी परिवारसहित काठमाडौंमा व्यापार गर्थे । आफ्नो घर दैलोमा तामाकोसी निर्माण हुने भएपछि राजधानीमा हुँदा छँदाको व्यापार छोडेर उनी गाउँ फर्किए । र, त्यहीँ पसल खोलेर व्यावसाय सुरु गरे ।
तामाकोसी आउने पक्का भएपछि लामाबगर फर्किएको दिन उनी आज पनि सम्झिन्छन्– पहिला सडक नहुन्जेल यो गाउँमा धेरै दुःख थियो । जता जाँदा पनि पैदलै हिड्नुपर्ने बाध्यता । सरकारको मुख ताकेको भए अहिलेसम्म बाटो पुग्ने थिएन । तामाकोसीले सडकको पुर्याइदियो । गाउँको मुहारै फेरियो ।
तामाकोसीले सडक पुर्याएपछि धेरै स्थानीय गाउँ फर्किएर आफ्नो क्षमताअनुसारको काम गरिरहेको छिरिङ बताउँछन् । प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीयले आयोजनामै रोजगारी पाएका छन् । हिजोसम्म बाँदर लड्ने भीरमा आज आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले स्थानीयको आर्थिक हैसियत फेरिदिएको उनी स्वीकार्छन् ।
तामाकोसीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अहिलेसम्म करिब ३२ करोड रुपैयाँ स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च गरिसकेको छ ।
तामाकोसीले सडकसँगै उत्तरी भेगका जनता लाभान्वित हुने गरी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । गाउँमै एम्बुलेन्स पुगेपछि बिरामीलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन सहज भएको अनुभव उनले सुनाए ।
आयोजनाले गाउँमै स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरिदिएको छ । सामान्य बिरामी हुँदा अन्यत्रै धाउनुपर्ने बाध्यता छैन । ‘गाउँमा जलविद्युत् आयोजना बन्दा बिजुली मात्रै होइन विकास पनि आउने रहेछ । आयोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी सबै चिज ल्याएको छ,’ उनले खुसी व्यक्त गरे ।
तामाकोसीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अहिलेसम्म करिब ३२ करोड रुपैयाँ स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च गरिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायत विकास निर्माणका काममा यो रकम खर्च भएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् ।
आयोजनाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण, एम्बुलेन्स वितरणका साथै ४० भन्दा बढी विद्यालयमा आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गरेको छ । लामाबगरमा गौरीशंकर माविको भवन, ठाउँ–ठाउँमा पदमार्ग निर्माण तथा विस्तार, खानेपानी विकासमा समेत काम गरिरहेको न्यौपानेले बताए ।
यसैगरी, नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका–५ का नेत्रप्रसाद भट्टको जीवन जलविद्युत्ले नै फेरिदिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उनी जलविद्युत्ले ल्याएको विकास देखेर दंग छन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँदा आर्थिक लाभ लिन सकेको बताउँछन् । ‘त्रिशूली–३ ‘ए’ आउनुअघि हाम्रो गाउँ विकासबाट पछि परेको कुहिनेटो जस्तो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना आउनु नै हाम्रा लागि विकास भयो ।’
आयोजनाले प्रभावित गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक लगायतको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । ‘ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना पुग्नु रोजगारीका अवसर प्रवेश गर्नु हो’ भन्छन् उनी । यसमा स्थानीयले बिरोध गर्न नहुने उनको बुझाई छ ।
८४ वर्षीय केतनाथ भट्ट पनि आयोजनाले ठूलो लगानी गरेर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गरिदिएकोमा खुशी व्यक्त गर्छन् । ‘भूकम्पले विद्यालय भवन भत्काउँदा गाउँका छोराछोरी, नातिनातिनालाई पढ्न समस्या थियो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अब पक्की भवन बनेको छ । बालबालिकाले राम्रो पढ्न पाएका छन् ।’
त्रिशूली ३ ए र त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइनको रुट पर्ने ४ नगरपालिका तथा ५ गाउँपालिकाका २१ वडा प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन् । प्रभावित वडाले लाभ पाउने गरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । यसमा अहिलेसम्म १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
त्रिशूली ३ ए र त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइनको रुट पर्ने ४ नगरपालिका तथा ५ गाउँपालिकाका २१ वडा प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन् । प्रभावित वडाले लाभ पाउने गरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
प्रभावित वडामा ८ वटा नयाँ विद्यालय भवन बनेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ विद्यालय निर्माणमा सहयोग गरेको छ । ७ सामुदायिक भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । ८४ स्थानमा सडक निर्माण तथा सुधार, सिँचाइ कुलो मर्मत, मन्दिर क्षेत्र सुधार, गोरेटो बाटो, खानेपानी, खेलकुद मैदान, पार्क तथा वडा कार्यालय निर्माणमा पनि आयोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
तुप्चे सडकको पहिलो प्याकेजमा ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र दोस्रोमा करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरी १० किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेको लगानीको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयले पाएका छन् । यसले आयोजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व बढेको छ ।
उता सोलुखुम्बु दूधकुण्ड नगरपालिकाबासी केदारभक्त कार्की ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु प्रभावित हुन् । आयोजनाले सुरु गरेको ‘जीविकोपार्जन उत्थान तथा विकास’ कार्यक्रमको संयोजक भएर प्रभावित क्षेत्रमा उनले काम गरिरहेका छन् ।
‘निर्माणको सुरुदेखि नै आयोजनाले प्रभावितलाई लक्षित गरेर धेरै योजनामा काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नगरपालिकामा ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी निर्माण भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले विकासका काममा लगानी गरेका छन् ।’
‘जीविकोपार्जन उत्थान तथा विकास’ अन्तर्गत बंगुर, बाख्रापालन, किबी तथा तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसबाट आफूले प्रत्यक्ष लाभ लिएको कार्की बताउँछन् । निकट भविष्यमै डेरी फार्म, टेलरिङ, माछापालन लगायत कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
बाख्रापालन कार्यक्रम अन्तर्गत २५ घरधुरीलाई २ वटा जमुनपारी जातको बाख्रा दिएर सुरु गरिएको थियो । पहिलो चरणमा बाख्रा अनुदानमा पाएका कृषकले उत्पादन लिइसकेको कार्की बताउँछन् । बंगुर पाल्ने किसानले पनि उत्पादन लिन सुरु गरिसकेका छन् । २० घरधुरीले किबी खेती गरेका छन् । किबी खेतीबाट प्रतिफल लिने दिन नजिकिँदै गएको कार्कीले सुनाए ।
यस्तै, स्थानीयको क्षमता अभिबृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले १ सय ५० युवालाई ५ विधामा तालिम दिइएको छ । तालिम लिएका धेरैले यहीँ काम गरिरकेका छन् । केहीले नजिकै बनिरहेका अन्य आयोजनामा काम गरिरहेका छन् । केही भने तालिमको प्रमाणपत्र लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
हिजो बेरोजगार भएर डुल्ने व्यक्तिले आज हजार होइन वर्षमा लाखौं रुपैयाँ कमाउने भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा यसको श्रेय पूर्णरूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई नै दिन्छन् । जसले जटिल दैनिकीलाई सरल बनाइदिएको छ ।
विश्व बैंकको वातावरण तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी गर्नुपर्ने नियमका कारण पनि आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले बताए । यो बाहेक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने लगानी भइरहेको छ ।
आयोजनाको स्थानीय कार्यालयमा महिला सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै रोजगारी दिएको छ । कूल १२ सय कामदार कार्यरत रहेकोमा २ सय जना स्थानीय छन् । तल्लो सोलु ‘सुपर सिक्स’ अन्तर्गतको आयोजना भएकाले अन्यको तुलनामा बढी रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । ३० वर्षमा आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने गर्गले बताए ।
तामाकोसी, तल्लो सोलु, त्रिशूली–३ ‘ए’ त केही नमुना मात्र हुन् । यी र यस्तै आयोजनाले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याएको देख्न सकिन्छ । प्राधिकरण, स्वदेशी वा निजी क्षेत्रको लगानीका आयोजनाले मापदण्ड अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेका छन् । एउटा आयोजना निर्माण हुँदा एकसाथ प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नती पनि भइरहेको हुन्छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडल अनुसार लगानी भएका आयोजनाले प्रभावित र जिल्लाबासीलाई सेयर दिएका छन् । सेयर पाउँदा आयोजनाप्रति स्थानीयले अपनत्व महसुस गरेका छन् । सीप, क्षमता र दक्षता अनुसार रोजगारी पाउँदा दुर्गम ग्रामीण भेगको अर्थतन्त्र चलामान भएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।